Parrot SLAMdunk: yakanaka kit yekugadzira drones | Linux Vakapindwa muropa
Parrot SLAMdunk: yakanaka kit yekugadzira drones
Parrot SLAMdunk yakavhurika Hardware uye software kit iyo inogonesa kugadzirwa kwemadhoni kana ndege dzisina kumakwa. Iyo yakavakirwa paUbuntu tekinoroji uye ROS inoshanda sisitimu yemarobhoti. SLAM inomiririra Simultaneous Localization Uye Mapping, uye inobvumira dhizaini yekushandisa kwepamberi iyo inobvumidza kunzwisisa nekumaka GPS masaini mu3D. Uye kunyangwe yakagadzirirwa madrones, achivakirwa paROS nenzvimbo yekuvandudza yeLinux, inogona kutungamirwa kune mamwe marudzi marobhoti senge maoko akatsanangurwa, marobhoti anofamba, nezvimwe.
SLAMdunk kunyorera kunosanganisira kuzvimiririra kufamba kwe drones uye marobhoti epasi, 3D cartography, kudzivirira kwezvipingamupinyi zvinogona kuwanikwa munzira izvo zvigadzirwa, kugadzirwa kwezvimisikidzo zvemadhoni uye marobhoti, marobhoti mhinduro uye kuunganidzwa kwedata kuburikidza ne stereo kamera uye yakasanganiswa sensor matrix (pakati payo IMU, barometers, magnetometer, ultrasound, nezvimwe .), kuwedzera kune mamwe mabasa.
Muchidimbu, iyi yekuvandudza Hardware / software kit inogona kukubatsira kuti ugadzire ako matoyi kana kukudziridza research, mazano vadzidzi, nezvimwe. Zvese nerutsigiro uye kuvimba nekambani yeFrance Parrot, iyo yatove neakanaka track rekodhi mukugadzira marobhoti uye drones pamitengo inodhura. Uye kana iwe uchifarira rudzi urwu rwekuvandudza makiti uye nyika yemarobhoti uye drones, kubva kuLxA tinokukurudzira kuti ushanyirewo webhusaiti ye Erle robotics, iyo kambani yeSpain ine hukuru hukuru uye hunonakidza zviitiko.
Chekupedzisira, ndinoda kutaura kuti iyi Parrot kit inobvumira kuzvimiririra kufamba uye kudzivirira zvipingamupinyi zvakazara otomatiki. Nezve iyo SLAM algorithm, inobvumira rum kana robhoti kuti igadzire kopi ye3D yenharaunda kuti iwane nzvimbo yayo uye yezvipingamupinyi zvingave zviri mukufamba kwayo. Zvese izvi zvinogadziriswa neNVIDIA Tegra K1 SoC ine simba, uye masisitimu ekugadzirisa hupenyu hwebhatiri redrone, ichipa kuzvitonga kuzere. Iyo zvakare inosanganisira USB yekubatanidza, jack tambo uye inorema chete nezve 140 gramu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Parrot SLAMdunk: yakanaka kit yekugadzira drones
Fedora 25 Iye Zvino Yava Kuwanikwa!
Maitiro ekuisa SQL Server pane Fedora